Ukuhlaziywa kweKhaya laseMarigny kwiBhloko enye ukusuka kwikota yesiFrentshi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKhalil
Ngena ngomnyango wabucala ukuya kweli khaya lihlaziyiweyo lilungiswe kakuhle lompu kwindawo yaseMarigny eNew Orleans. Yazisa isitena esiveziweyo, i-chandelier emangalisayo, kunye nokuhombisa okungaphantsi. Relax kwindawo yabucala yangaphandle kunye netafile ye-bistro. Ifakwe ibhloko enye ukusuka kwikota yesiFrentshi kunye neebhloko ezimbalwa ukusuka kwisitalato samaFrentshi, le ndlu ihamba umgama ukuya eNew Orleans eyona nto inomtsalane kwaye ikwayibhloko ukusuka kumgca wemoto yesitrato. Ukungena kwangethuba / ukukhangela kade kusimahla xa kukho. Ndiyavuya ukwenza amalungiselelo okugcinwa kwengxowa ukuba kunokwenzeka. Indawo yokupaka iyafumaneka ngediphozithi ebuyiselwa ngokupheleleyo
Ngena ngomnyango wabucala ukuya kweli khaya lihlaziyiweyo lilungiswe kakuhle lompu kwindawo yaseMarigny eNew Orleans. Yazisa isitena esiveziweyo, i-chandelier emangalisayo, kunye nokuhombisa okungaphantsi. Relax kwindawo yabucala yangaphandle kunye netafile ye-bistro. Ifakwe ibhloko enye ukusuka kwikota yesiFrentshi kunye neebhloko ezimbalwa ukusuka kwisitalato samaFrentshi, le ndlu ihamba umgama ukuya eNew Orleans e…
- Khalil, umbuki zindwendwe wakho
4.98 (iingxelo zokuhlola 225)
IMarigny yenye yezona ndawo zindala zaseNew Orleans. Kukuhamba umgama ukuya kwiindawo zokutyela, iindawo zentselo, kunye neendawo zokundwendwela. Apha, abantu bahlala kwaye basebenza. Yibhloko enye ukusuka kwiKota kwaye ecaleni kwayo yonke indawo ephawulekayo.
Umgama ukusuka eLouis Armstrong New Orleans International Airport
imizuzu eyi-22 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Khalil
Inombolo yomthetho: 19STR-20049, 19-OSTR-0000